Ukuqonda imiceli mngeni (kunye neeNgxaki) zoYilo lwe-imeyile ye-HTML | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 23, 2022 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Kodwa abahleli be-imeyile basemva kakhulu. Nasi isizathu...
Ukuyila ii-imeyile ze-HTML Kunzima kakhulu kuneWebhusayithi
Ukuba inkampani yakho ifuna i-imeyile entle ye-HTML eyilwe, inkqubo inzima ngakumbi kunokwakha iphepha lewebhu ngenxa yezizathu ezininzi:
Akukho Migangatho – AKUKHO ukubambelela ngokungqongqo kuyo nayiphi na iwebhu Imigangatho ngabaxhasi be-imeyile ababonisa i-imeyile ye-HTML. Enyanisweni, ngokwenene umxhasi ngamnye we-imeyile kunye nenguqulelo nganye yomxhasi we-imeyile yenza ngokwahlukileyo. Abanye baya kuhlonipha iCSS, iifonti zangaphandle, kunye neHTML yanamhlanje. Abanye bahlonipha isitayile esithile esingaphakathi, baya kubonisa kuphela ingqokelela yeefonti, kwaye bangayihoyi yonke into ngaphandle kwezakhiwo eziqhutywa yitafile. Kuhle ngokwenene ngeli xesha ukuba akukho mntu usebenza kulo mbandela. Ngenxa yoko, ukuyila iitemplates ezinikezela ngabathengi kunye nezixhobo ngokuthe rhoqo kuye kwaba lishishini elikhulu kwaye kunokubiza kakhulu.
Ukhuseleko loMxumi we-imeyile Kule veki nje, i-imeyile ye-Apple ihlaziywe ukuvala yonke imifanekiso kwii-imeyile ze-HTML ngokuzenzekelayo ezingafakwanga kwi-imeyile. Unganika imvume yokuyilayisha nge-imeyile ngexesha, okanye kufuneka uvule useto ukuvala olu seto. Kunye nesetingi zokhuseleko lomxumi we-imeyile, kukho nesetingi zeshishini.
Ukhuseleko lwe-IT -Iqela lakho le-IT linokusebenzisa imigaqo engqongqo kwizinto ezinokunikezelwa nge-imeyile. Ukuba imifanekiso yakho, umzekelo, ivela kwidomeyini ethile engabhalwanga mhlophe kwi-firewall yenkampani, imifanekiso ayinakuvela kwi-imeyile yakho. Ngamanye amaxesha, kuye kwafuneka siphuhlise ii-imeyile kwaye sibambe yonke imifanekiso kwiseva yequmrhu ukuze abasebenzi babo babone imifanekiso.
Ababoneleli ngeNkonzo ye-imeyile - Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, abakhi be-imeyile ababoneleli ngenkonzo ye-imeyile (ESPs) ukwazisa iingxaki ngenene kunokuba zibanyanzele. Ngelixa bakhuthaza umhleli wabo Into oyibonayo yile uyifumanayo (WYSIWYG), into eyahlukileyo ihlala iyinyani ngoyilo lwe-imeyile. Uya kujonga kuqala i-imeyile kwiqonga labo, emva koko umamkeli we-imeyile ubona zonke iintlobo zeengxaki zoyilo. Iinkampani zihlala zikhetha ngokungaziwa umhleli osisityebi endaweni yomhleli otshixekileyo ecinga ukuba omnye uneempawu ezininzi kunomnye. Okuchaseneyo yinyaniso... ukuba ufuna ii-imeyile ezinikezela ngokungaguquguqukiyo kubo bonke abaxumi be-imeyile, kulula ngakumbi kuba okuncinci kunokungahambi kakuhle.
Unikezelo loMxumi we-imeyile -Kukho amakhulu abathengi be-imeyile, nganye inikezela ngeHTML ngokwahlukileyo kwi-desktop, ii -apps, iselfowuni, kunye nabathengi beemail. Ngelixa umhleli wakho wombhalo onqabileyo kumboneleli wakho wenkonzo ye-imeyile unokuba noseto lokubeka isihloko kwi-imeyile yakho... i-padding, imida, ubude bomgca, kunye nobukhulu befonti bunokwahluka kumxhasi ngamnye we-imeyile. Ngenxa yoko, kufuneka uthule i-HTML kunye nekhowudi yonke into eyahlukileyo (jonga umzekelo ongezantsi) - kwaye kaninzi ubhale ngokungafaniyo okuthe ngqo kumxhasi we-imeyile - ukufumana i-imeyile ukunikezela ngokuqhubekayo. Akukho ntlobo zebhloko ezilula, kuya kufuneka wenze iziyilo eziqhutywa yitafile ezilingana nesakhiwo sewebhu kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo. Yiyo loo nto naluphi na uyilo olutsha lufuna zombini uphuhliso kunye nomxumi we-imeyile kunye novavanyo lwesixhobo. Into oyibonayo kwi-inbox yakho inokwahluka kwaphela le ndiyibona kwi-inbox yam. Kungenxa yoko le nto ukunikezela izixhobo ezifana I-imeyile kwi-Acid or Litmus Kunyanzelekile ukuba uqinisekise uyilo lwakho olutsha lusebenza kubo bonke abathengi be-imeyile. Nalu uluhlu olufutshane lwabaxumi be-imeyile abaziwayo kunye neenjini zabo zokunikezela:
Apple Mail, Outlook for Mac, Android Mail kunye iOS Mail ukusetyenziswa WebKit.
Outlook 2000, 2002 kunye 2003 ukusetyenziswa Internet Explorer.
Outlook 2007, 2010 kunye 2013 ukusetyenziswa Igama leMicrosoft (ewe, iLizwi!).
Abathengi beWebmail basebenzisa injini yesikhangeli sabo (umzekelo, iSafari isebenzisa iWebKit kunye neChrome isebenzisa iBlink).
Umzekelo we-HTML yeWebhu Vs. I-imeyile
Ukuba ufuna umzekelo obonisa ukuntsokotha koyilo lwe-imeyile ngokuchasene newebhu, nanku umzekelo ogqibeleleyo ophuma kwinqaku le-Mailbakery. 19 Umahluko omkhulu phakathi kwe-imeyile kunye ne-HTML yewebhu:
Kufuneka sakhe uthotho lweetafile ezibandakanya zonke isitayile sangaphakathi esiyimfuneko ukubeka ngokufanelekileyo iqhosha kwaye siqinisekise ukuba likhangeleka lilungile kubo bonke abathengi be-imeyile. Kukwakho nethegi ekhaphayo yesimbo phezulu kule imeyile ukubandakanya iiklasi.
Singasebenzisa icwecwe lesimbo langaphandle elineeklasi ukuchaza imeko, ulungelelwaniso, umbala, kunye nobukhulu bethegi yeankile evela njengeqhosha.
UyiNqanda njani imiba yoYilo lwe-imeyile
Imiba yoyilo lwe-imeyile inokuphetshwa ngokulandela inkqubo efanelekileyo:
Uyilo lwesakhelo -Yakha itemplate enezakhiwo ezahlukeneyo kunye neebhloko zomxholo ezibandakanya zonke isitayile onokuthi ufune ukuvelisa kuyilo lwakho lwe-imeyile. Xa siphumeza umxhasi, sihlala sibatyhala yila i-imeyile yekamva – hayi nje iphulo le-imeyile elilandelayo elithunyelweyo. Ngaloo ndlela, sinokuyila ngokupheleleyo, siphuhlise, sivavanye, kwaye siphumeze iindlela zokusebenza eziyimfuneko phambi kokuba bake bathumele loo imeyile yokuqala.
Uvavanyo lweTemplate -Ukuqonda abathengi be-imeyile abasebenzisa ababhalisi bakho kunye nokuqinisekisa ukuba i-imeyile yakho ye-HTML ivavanywa ngokupheleleyo kwiselfowuni kunye nedesktop kubalulekile ngaphambi kokuthumela nayiphi na itemplate. Singayila i-imeyile ngokwenyani ukusuka kuyilo lwe-photoshop… kodwa ukuyisika kunye nokuyenza ibe yitafile eqhutywa yitafile, umxhasi we-imeyile kubalulekile ekuthumeleni uyilo lwe-imeyile olufanelekileyo nongaguqukiyo.
Uvavanyo lwangaphakathi - Nje ukuba ithempleyithi yakho iyilwe kwaye ivavanywe, kufuneka ithunyelwe kuluhlu lwembewu yangaphakathi kumbutho ukuze iphonononge kwaye ivunywe. Ungade ufune ukuqala ngeseti encinci yabantu ukuze uqale uqinisekise ukuba akukho firewall okanye imiba yokhuseleko enxulumene nokunikezela nge-imeyile ngaphakathi. Ukuba oku kwakha umzekelo kumboneleli wenkonzo omtsha we-imeyile, usenokufumana ukucoca okanye ukuvala imiba eyayanyaniswa nokufumana i-imeyile yakho kwi-inbox.
Template Versioning -Sukutshintsha uyilo lwakho okanye uyilo ngaphandle kokusebenza kuguqulelo olutsha lwetemplate yakho enokuthi iyilwe, ivavanywe ngokufanelekileyo, kwaye isetyenziswe. Amashishini amaninzi athanda uyilo olulodwa kwiphulo ngalinye… kodwa oko kufuna ukuba yonke i-imeyile iyilwe, iphuhliswe, kwaye isetyenziswe kwiphulo ngalinye. Oku kongeza itoni yexesha kwinkqubo yokuthengisa i-imeyile ngaphakathi. Kwaye, ubeka emngciphekweni wokungaqondi ukuba zeziphi izinto kwi-imeyile yakho eziqhuba kakuhle ngaphezu kwezinto ezingekhoyo. Ukungaguquguquki ayisiyondlela nje yokwenza inkqubo ibe lula, kukwabalulekile kwindlela yokuziphatha yababhalisi bakho.
I-imeyile yoMboneleli weNkonzo ngokuKhethekileyo - Phantse wonke umboneleli wenkonzo ye-imeyile unendlela yokusebenza malunga nemiba eyaziswa ngumakhi wabo we-imeyile. Sihlala songeza i-CSS ekrwada kwi-akhawunti-okanye sibe nebhloko yomxholo ekufuneka ifakwe kuyo yonke i-imeyile-ukuze inkampani isebenzise umhleli we-imeyile owakhelwe-ngaphakathi kwaye ingaphuli uyilo lwe-imeyile yakho. Ewe, oko kunokufuna uqeqesho oluthile kunye nolawulo lwenkqubo ukuze kusetyenziswe loo manyathelo ukuqinisekisa ukuba ayathotyelwa. Okanye-ungafuna nje ukuphuhlisa uyilo lwakho lwe-imeyile kwisisombululo esingqinwe ukuba sisebenza kubo bonke abathengi kunye nezixhobo, emva koko uyincamathisele kumboneleli wakho wenkonzo ye-imeyile.
Iiplatform zoYilo lwe-imeyile
Ngenxa yokuba iiplatifti zenkonzo ye-imeyile zenze umsebenzi ombi ekwakhiweni nasekugcineni umxumi onqamlezileyo kunye nesixhobo esinqamlezileyo esinikezelwa ngabakhi, inani lamaqonga amakhulu aze kwintengiso. Enye esiye sayisebenzisa kakhulu Stripo.
I-Stripo ayiyena nje umakhi we-imeyile, banayo nelayibrari yeetemplates ezingaphezu kwe-900 ezinokungeniswa ngaphandle ngokulula. Nje ukuba uyile i-imeyile, unokuthumela i-imeyile kwi-60+ ESPs, kunye nabathengi be-imeyile, kubandakanya MailChimp, HubSpot, iPhulo Monitor, AWeber, eSputnik, Outlook, kunye Gmail. Eyona nto ibhetele kuzo zonke iitemplates zeStripo ziza novavanyo lonikezelo lwe-imeyile olubandakanyiweyo ukuze ube nokuqinisekisa ukuba luvavanyiwe kwaye lusebenza ngokungaguqukiyo kubathengi be-imeyile abangama-40.
Ngena kwiDemo yoMhleli weStripo
Ukuvezwa: Ndidibanisa neyam inkampani yokuthengisa oyila kwaye abeke ii-imeyile ezinqamlezileyo zabaxumi kwiimpawu ezikhokelayo phantse nakuwuphi na umnikezeli wenkonzo ye-imeyile. Ndikwayinxalenye ye Stripo kwaye ndisebenzisa ikhonkco lam kweli nqaku.
tags: bhanyaUmakhi wemeyileabathengi beimeyileUyilo lwe-imeyileemail MarketingUkunikezelwa kwe-imeyileumhleli wesevisi ye-imeyileababoneleli ngeenkonzo ze-imeyileuyilo lwetemplate ye-imeyileuvavanyo template emailuguqulelo lwetemplate ye-imeyileitemplate ye-imeyileUvavanyo lwe-imeyileumhleli wokubhaliweyo we-imeyilehtml imeyileumqhubi we-intanethiivenkile yemeyileilifu lokuthengisaigama leMicrosoftstripoiwebhuwebmaillwenshya
Usetyenziso lwe-Elfsight: I-Ecommerce elungiselelwa ngokulula, iFomu, uMxholo, kunye neeWidgets zeNtlalo kwiWebhusayithi yakho.